Laba-Awood ee Dagaal Saddex-Waddo ah: Diidmada Halista ah ee Hurricane Michael - Gargaarka Musiibada ee Mataanaha
Home/updates/Laba-Awood ee Dagaal Saddex-Waddo ah: Diidmada Halista ah ee Hurricane Michael
Oktoobar 10, 2018, Hurricane Michael wuxuu galay Florida panhandle isagoo leh ferocity ka duwan wax kastoo lagu arkay taariikhda gobolka ee la duubay. Baaxadda burburka waa adag tahay in laga takhaluso, haddii aysan suurtagal ahayn. Waxaan ku soo aragnay mustaqbalka isbuucaan Florida panhandle. Mustaqbalkuna mugdi buu leeyahay.
In kabadan, waxaan is aragnay anigoo dhahda "Weligeey ma arkin wax sidan oo kale ah." Waxaan daawaynay Kastamka Mareykanka iyo Xuduuda xuduuda oo ay cunto iyo biyo ku jiraan Altha, Bakhaarka FL oo ay la socdaan wakiilo Hay'ada Socdaalka iyo Kastamyada oo sugaya afduubka iyo masaafurinta muhaajiriintii bilaa-sharciga ahayd ee quus ka taagnaa inay raadiyaan sahay. Waxaan ku dagaallannay wadooyinka culeyska leh si aan u gaarno bulshooyinka reer miyiga ah halkaasoo dadka waaweyni ay ku xanniban yihiin guryahooda bilaa cunno iyo biyo la'aan halka booliiska Florida ay u taagan yihiin si aan kala sooc lahayn u xayiraya taraafikada gawaarida kooxda, iyagoo ku dhawaaqaya gacmahooda jeebkooda.
Dadka ku nool Lynn Haven, FL waxaa loo sheegay inay haystaan ​​seddex maalmood oo ay ka nadiifiyaan alaabtooda guryahooda laga qabsaday ee ku yaallay dhisme ku yaal Pinnacle Avenue ama alaabtooda harsan lagu tuuri doono qashinka. Kirada kiraystaha ee Oktoobar wali dib looma soo noqonin maadaama lagu qasbay waddada. Waxaan ku aragnay dugsi dhexe oo ku yaal Blountstown, FL oo saqafkiisa ka dillaacay, huruud isu beddelay, biyo-xireenno biyo-galeen dhammaan meesha baarkinka. Hoolka laga soo galo iskuulka wuxuu lahaa ereyada "insha allah waxaan ku kalsoonahay" kuna qornaa qaabkeeda, oo korka ka ilaalinaya iibsade muraayad quraarado dumay, alaab guri laga tuuray, iyo kumbuyuutar jabsadey oo kudhacey dhamaadka dhamaadka-dabeylo xoog badan. Waxaan shaki ku qabnaa in dugsiga waligiis dib loo dhisidoono.
Dhirtu way foororsadeen sida cadayga oo kale, geedaha oo dhanna waxay gaadheen xagga circa oo ay duufaanno kala jeexjeexeen, qayb ahaan waxay u kala jajaban yihiin kala badh oo isku mid ah sidii oo gacantii Ilaah samada ka soo degtay xagga jannada si ay uga duusho. Waxaan eegnay indhaha daalaya ee ku dhexjira gaajo, qorrax gubasho, iyo wajiyo dadka ka muuqdo oo raadinaya hal dhalo biyo keliya si ay u oomiyaan harraadkooda.
Guryuhu way kala jajaban yihiin. Xarumaha bulshada ayaa u kala jeex jeex jeexmay. Intaas oo dhanna ma aha hal gaari oo keliya oo loo yaqaan 'FEMA' ama xarun wax lagu qaybiyo.
Dadku waxay si toos ah u saameeyeen masiibooyinkaas oo inta badan ah bulshooyinka la takooriyay ee midabka iyo burburka deegaanka waxay horseed u yihiin cunsuriyadda deegaanka. Caasimadaha musiibada ayaa ka faa'ideysanaya bulshooyinkaas - sida ay ku sameeyeen New Orleans iyo Puerto Rico — oo u rogaya dhibatooyinkaas faa'iido. Ugaarsadeyaashu waxay ku sugan yihiin gees kasta, iyagoo raadinaya qaabab looga faa'ideysto dadaalada gurmadka musiibada ee qabanqaabiyaasha kooxeedyada. Siyaasiyiinta xiisaynaya inay soo bandhigaan sawiro Iyada oo leh miisaska shaaha lagu cabo ama Pizza lagu fadhiisto waxay si raaxo leh ugu fadhiyaan guryaha ay dhaliyaan matoorrada gaaska halka kuwo badani ay kudhacaan kulka kuleylka ah ee Gobolka Sunshine ayagoo aan lahayn tamar ay ku Awoodda A / C ama ku dallacaan koronto koronto.
Boqortooyadii Mareykanka ayaa hoos u dhac xoog leh ku yimid. Nidaamka dhaqaalaha adduunka wuxuu qarka u saaran yahay burbur buuxa. Waxaan wali ka soo kaban dib-u-dhiska '08' oo khubaradu saadaalinayaan qalalaasaha dhaqaale ee soo socdaa waa dhow geeska. Isbedelka cimilada Anthropogenic wuxuu hadda baabi'inayaa qalabka neoliberalism, taasoo kor u qaadeysa kororka fascism-ka buuxa. Maaddaama waddammada maal-gashadayaasha iyo shirkadaha ay sii wadaan inay uga faa'iideystaan ​​koonfurta adduunka kheyraadkeeda, dhul-gariirka dhul-gariirka ah iyo gobollada meeraha ayaa noqday kuwa aan laga maarmi karin nolosha aadanaha. Kuwa midigta ah jawaabtooda waa u diyaar: eedda soogalootiga iyo qaxoontiga, umadaha midabtakoorka leh, oo dhis anshax xumo u ahow waddaniyad iyo madaxnimo cad.
Maxaa inaga jawaab noqon?
Gobolku uma imanayo inuu ku badbaadiyo. Cayayaarayaalku ma badbaadin doonaan. Waa inaan isku caawino. Gargaarka isweydaarsigu waa cunsur. Midnimo, ee ma ahan sadaqo, waa magangalkeena waqtiyada kuwan oo kale ah.
Hurricane Michael maahan digniin, waa ballan. Qeybtaan '4 duufaan' waxay daaha ka qaadaysa xadadka neoliberalism iyo qatarta ku jirta xilligan casriga ah. Waxaan ku dul fadhinaa roob roobab ah Maaddaama isbeddelka cimilada dabiiciga ahi uu dardargalinayo burburka kaabayaasha dowladda, heerka shaqada iyo dadka la fogeeyay waxay ku xayiran yihiin xeebaha fuuq-baxa, gaajada, balwadda, iyo hoy la'aanta.
Haddii aan si dhab ah u aaminsanahay mashruuca abuurista adduun ka wanaagsan, markaa waa inaan lahaano is-hoosaysiinta si aan u daadinno daahirsanaanta fikradeed ee dadaallada aan kula jirno baahiyaha maaddada aadanaha. Waxaan u baahanahay inaan khadka ka baxno oo aan abaabulno waddooyinka, anagoo ku tababarana isgaarsiinta xudunta u leh kuwa saameeyay dhibaatada deegaanka iyadoo isla mar ahaantaana uga jawaab celineysa qaab samafal ahaan halkii aan ka abaalmarin lahayn is afgaradka wuxuuna baabi'inayaa kala sarraynta iyo hey'adaha. Degdeggu waa muhiim sidoo kale istiraatiijiyad ahaan marka loo eego dhibaatooyinkaas. Kuwani waa tiro koob oo ka mid ah casharradii aan ka barannay abaabulidda ka-hortagga musiibada.
Waxaan u halgamaa mararka qaarkood si aan u aragno rajo mustaqbalka. Had iyo jeer, haddii aan si toos ah u soconeyno, qaar badan oo inaga mid ah waxay u arkaan wax yar oo dhiirigelin rajo leh. Isbedelka cimilada Anthropogenic waa mid laga naxo in la arko. Waxaan ku jirnaa xilliyadii furitaanka ee isbeddellada adduunka, oo ah mid si khaldan u wasakhaysan wasaqda warshadaha iyo maal-qabeenno dabayaaqadii xilli-dhaaf ah. Isbedelka Cimilada ma aha wax taasi doono dhacdo; waa wax hadda dhacaya. Haddii aan si caqli gal ah uga hor tagno nidaamyadan, waa inaan si dhakhso ah u joojino ka hadalka kuleylka adduunka sida inay tahay dhacdo mustaqbalka. Saas ma aha, waa wax aan nafteenna ka helno bartamaha waqtigan xaadirka ah.
Maaddaama ay gobolku xaddidday aagaga iyo dhulalkii si ay u burburaan — sida ku dhacday Flint, Michigan iyo Puerto Rico - waxaan helnaa fursado aan ku dhisno qaabab cusub oo bulshada iyo iskaashigaba dambaska. Waan carara karnaa, dib ula noqon karnaa, waxaanan iska fogeyn karnaa mas'uuliyadayada nafteenna iyo midkeenaba. Ama waxaan aqoonsan karnaa inay tahay waajib saaran kuwa haysta wax walba inay caawiyaan kuwa aan haysan. Maxim “Mid kasta oo ka mid ah kartidooda; mid walba sida loogu baahan yahay, ma aha eraybixin saddex geesood ah. Waa inaan horumarino qaabab adag oo aan isku difaacno oo aan is difaacno haddii aan badanahayno.
Si taas loo gaaro, tixgeli tan martiqaad. Is abaabulan. Mid ka mid ah dareennada ugu waaweyn ee annaga oo ah qabanqaabiyeyaasha bulshada ee Panhandle aan ku soo laabanay waqti iyo marlabaad maalmihii la soo dhaafay ayaa ah, "Waxaan jeclaan lahaa inaan si ka sii wanaagsan u diyaarin lahayn." Isu diyaarinta ayaa muhiim ah haddii aan nahay inaan horumarinno adkeysiga si aan uga difaacno beesheena bulshada iyo bulshada. Dhibaatooyinka deegaanka. Dhisidda jikooyinka cuntada, xarumaha bulshada, iyo ururrada is-dhex gala ma ahan shaqo galmo aan caadi ahayn — ma helayaan waxyaabo badan oo macmacaan ama wadaag internetka ah. Laakiin waxay isbedel ku samayn doontaa in dadku gaajoonayaan iyo haddii kale.
Garan mayno haddii aan guuleysan doonno. Maalmaha qaarkood, inbadan oo naga mid ahi uma maleyno inaan sidaas sameyn doonno. Laakiin anagu kula dagaallamayn kuwa fasixiyeyaasha ah maxaa yeelay waan guuleysan doonnaa. Waxaan la dagaallamaynaa kuwa fasistka ah maxaa yeelay waa fasixiin. Rajadayada Sisyphian iyo dhammaan halganka aan ku jirno, aakhirka, waxay noqon karaan kuwo aan dhammaanayn. Laakiin waan jeclaan doonnaa waana cadhoon doonnaa. Waan abuuri doonnaa waana baabi'in doonnaa. Waxaan ku dhisi doonnaa laba-awood labo-geedi-dagaalkan. Waxaanuna ku dadaali doonnaa dhammaanteenna awooddeena wadajirka ah si aan uga dhisno adduunyo ka wanaagsan duqeymihii hore.
Abaabulayaasha bulshada ee dhulka ayaa sii wadi doona u baahan taageeradaada maalmaha, toddobaadyada, iyo bilaha soo socda. Haddii aadan imaan karin Florida panhandle si aad uga qeybqaadato dadaalada gargaarka ee socda, fadlan tixgeli inaad taageerto ururada ka shaqeeya shaqadan muhiimka ah ee salka ku haya dhulka.
Xarunta u doodista Dadka ee Florida
Liistada Rabitaanka Amazon